IShift yokuThenga kwi-Intanethi kunye nabathengisi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 11, 2015 Douglas Karr
Kukho utshintsho olwenzekayo phakathi kokuthengisa kunye nokuthenga kwi-Intanethi, kodwa andiqinisekanga ukuba nabani na uyayiqonda indawo esiya kuyo. Ukhuphiswano olunobundlongondlongo kunye nokunikezelwa simahla kokuthumela ngenqanawe kulungile kubathengi kodwa baqhuba ishishini kwiinkampani ze-ecommerce. Kwangelo xesha, abathengi basathanda ukubonisa kwaye uchukumise kwaye uzive iimveliso abajonge ukuzithenga.
Omnye umqobo kwinkampani ye-ecommerce emsulwa linani elikhulayo lamazwe asebenzisa irhafu yokuthengisa kwiinkampani ze-ecommerce ngenxa yoxinzelelo olusetyenziswa ziivenkile zentengiso. (Le nto indenza ndiqalekiswe… irhafu iyimfuneko ukuxhasa ukugcwala kwabantu, ukhuseleko, umlilo, amapolisa, njl. Njl.
Indawo yokuthengisa inokukhuseleka kunokuba abantu abaninzi beqonda, ukubonelela ngendawo yokubonisa kunye nendawo yokupakisha abathengi abayifunayo ngoku. Nangona kunjalo, akukho mathandabuzo ukuba ukuthengisa kwi-Intanethi kuyayiguqula indlela eyenziwa ngayo ishishini. Abathengisi kufuneka babenobukho obumangalisayo kwi-Intanethi apho banokwandisa ukufikelela kwabo ukuze bathathe indawo yezithuthi abangazongena kwivenkile.
I-eCommerce ngenene yindawo yokugcina entsha yokuthengisa. Senze le infographic ukunika intengiso kunye nabacwangcisi bezentengiso iintloko malunga nokuba yeyiphi imizi mveliso ebona eyona ntengiso kwi-Intanethi kunye nokuqonda ukuba kutheni abantu bethenga kwi-Intanethi. Ngaba ukuthengisa kwakho kunyukile ukusukela kutshintsho lokuthenga kwi-Intanethi? Okanye ubonile ukuhla kwentengiso. Ukuba ukwindawo yokuthengisa okanye ukubonelela ngeenkonzo ezinokuthengwa kwi-intanethi, le infographic yeyakho. UPeter Koeppel
I-infographic engezantsi yalatha kwinani levenkile ezithengiswayo ngelixa indawo igcinwe igcinwe. Iivenkile ezithengisa izinto ziyashenxisa ukusuka kwiishelufa ezinesitokhwe ziye kwiindawo zokubonisa apho intengiso kunye neenkonzo zabathengi kufuneka zenziwe ngcono. Ngokoluvo lwam, ukuba unayo indawo yokuthengisa okanye indawo ye-ecommerce- kodwa hayi zombini - unokuba usiya kumaxesha anzima.
I-Koeppel ngqo yinkampani eneendlela ezininzi zokuphendula ngokuthe ngqo ezinamava abanzi okulawula ezinye zeempembelelo zokuvelisa eziphambili kumabonwakude.
tags: eCommerceimikhwa ye-ecommercekoeppel ngqopeter koeppelIvenkileiindlela zentengiso